चौतारी लघुवित्तको आईपीओ आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, कति पर्यो आवेदन र कहाँबाट दिने ? - Dainikee News::
चौतारी लघुवित्तको आईपीओ आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, कति पर्यो आवेदन र कहाँबाट दिने ?
काठमाडौं, मंसिर २३ । चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मंसिर १९ बाट निष्काशन गरेको साधारण शेयर (आईपीओ)) मा आवेदन दिने आज अनितम दिन हो । लघुवित्त कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित ५ लाख ६० हजार ७ सय कित्ता शेयरको आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । लघुवित्तले बिक्री प्रवन्धकको रुपमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्ति गरेको छ ।
चौतारी लघुवित्तको आईपिओमा शुक्रबारसम्म करिब २ लाख २ हजार ३ सय ६९ आवेदकबाट १ करोड २४ लाख ७९ हजार ७ सय ८० कित्ताको लागि आवेदन परेको छ । यो कुल निष्काशनको २० गुणा भन्दा बढी हो । आवश्यकताभन्दा बढी आवेदन परेकोले बिक्री प्रबन्धकले मंसिर २३ गतेबाट बन्द गर्न लागेको हो ।
चौतारीले गत कात्तिक ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाएको थियो । धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिपछि विवरणपत्र लिएर नेपाल राष्ट्रबैंक पुगेको लघुवित्तको विवरणपत्र राष्ट्रबैंकले स्वीकृत गरेसँगै लघुवित्तले आईपीओ निष्कासन मिति तय गरेको हो । आईपीओमा ५० देखि ३ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइनेछ ।
यसको ६ लाख कित्ता साधारण शेयरमध्ये ९ हजार ३ सय कित्ता कर्मचारी र ३० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँकी रहेको शेयरको साधारण निष्काशन गरेको हो ।
लघुवित्तको कार्यक्षेत्र रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तुु, गुुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, दाङ ,प्यूठान, रोल्पा र सल्यान गरी १५ जिल्लामा रहेको छ । लघुवित्तको आईपीओमा शेयर आवेदन सी आस्वा सदस्य सबै वित्तीय संस्थाबाट गर्न सकिने छ ।
यो वित्तीय संस्थाले यही मंसिर १९ देखि छिटोमा २३ र ढिलोमा पुस १९ सम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, मंसिर २३, २०७५ /Sunday, December 9th, 2018, 7:26 am